Prime Minista Tongan na-agba ndị isi Pacific Island ume ka ha lụso oke ibu ọgụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » culinary » Prime Minista Tongan na-agba ndị isi Pacific Island ume ka ha lụso oke ibu ọgụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Egwuregwu • Tonga Na -agbasa Akụkọ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a
Pacific bụ ebe obibi nke oke ibu nke ụwa kachasị ibu na ndị isi obodo kwesịrị ịdị ala iji setịpụ ezi ihe nlereanya maka ndị bi na ya.
Mịnịsta Ala nke Tonga Akilisi Pohiva akpọkuola ndị isi ala ọzọ na Pacific ka ha dọọ ala iji setịpụ ezi ihe nlereanya maka ndị bi na mpaghara a. Ọbụna ọ tụrụ aro na ha nwere ike ibido asọmpi na-efu.
Pacific bu ebe kachasi buru oke ibu nke uwa na oria a na-enweghi ike ibute ya, Pohliva achoputala ime mpi a nke Pacific Islands Forum, nzuko nke mba ndi nwere onwe ha na Pacific Ocean. Onye ndu Tongan tụrụ aro ka a tụọ onye ndu ọ bụla na nzukọ nke afọ a tupu ọ laghachite n’afọ na-eso ya maka ọkwa ọzọ.
"Ọ bụghị maka onye kachasị kilogram, mana iji kpochapụ ibu ahụ, ị ​​ga-eri ọkụ ma nwee echiche ahụike siri ike ga-aga ogologo oge," Pohiva, onye bụbu onye nkuzi ụlọ akwụkwọ, kwuru na The Samoa Observer kwuru. "Ozugbo ndị isi na-eme mgbanwe n'echiche ahụ, ha ga-ekpebisi ike ime ka ndị ha nwee otu akụkụ wee pụọ ebe ahụ."
Dị ka Healthtù Ahụ Ike Worldwa si kwuo, otu n'ime ụmụaka ise na ndị nọ n'afọ iri na ụma na mba 10 Pacific dị ka oke ibu, ebe ụfọdụ nnyocha na-egosi na pasent 40 ruo 70 nke ụmụaka buru oke ibu ga-abụ okenye buru oke ibu. Claimstù WHO na-ekwu na njupụta nke oke ibu na mpaghara ahụ gbadara iji dochie nri nri ọdịnala site na nri ndị esiri na mba ọzọ.
Pohiva gosipụtara nhụsianya na mmetụta adịghị mma nke atumatu ndị na-anwa iji dozie esemokwu a na Pacific ma kwuo na ya nwere olile anya na asọmpi na-ebu ibu nwere ike isetịpụrụ ndị mmadụ ihe atụ dị mma.
O kwuru, sị, "Ọrịa na-enweghị ọrịa na-efe efe [ọnụọgụ] na oke ibu ụmụaka nwere ihe ọ bụla metụtara agwa anyị banyere iri nri na ibi ndụ anyị.
"Anyị na ndị isi agwaetiti dị na Pacific, anyị na-ezukọ ma na-ekwurịta ma na-ekwurịta okwu banyere okwu a, mana atụmatụ banyere okwu a anaghị enwe mmetụta… Anyị na-akwado otu okwu a kemgbe ọtụtụ afọ mana ọ dị ka ọ naghị arụ ọrụ."